Analog IR Sensor Warshada, Iibiyeyaasha - Shiinaha Analog IR Sensor Warshada
Dareemka Heerkulka IR ee Heerkulka Jirka ee Ogaanshaha STP9CF55C ee aan lala xidhiidhin
STP9CF55C Dareemayaasha Infrared (IR) ee cabbiraadda heerkulka aan xidhiidhka ahayn
Naqshadaynta faragelinta ka-hortagga-electromagnetic, STP9CF55C waxay ku adag tahay dhammaan noocyada kala duwan ee deegaanka codsiga.
Dareemka IR Thermopile ee aan lala xidhiidhin ee la socodka heerkulka STP9CF59
Dareemaha infrared-ka ee heerkulbeegga ee STP9CF59 ee cabbiraadda heerkulka aan lala xidhiidhin waa dareeme heerkulbeeye
Naqshadeynta faragelinta ka-hortagga-electromagnetic, STP9CF59 waxay ku adag tahay dhammaan noocyada kala duwan ee deegaanka codsiga.
Dareemka Infrared Heer kulka ee Saxnimada Sare ee aan Xidhiidhka lahayn ee Cabbirka Heerkulka STP9CF59H
Dareemaha infrared-ka ee STP9CF59H thermopile ee cabbiraadda heerkulka aan xidhiidhka ahayn waa dareeme heerkulbeeye
Naqshadeynta faragelinta ka-hortagga-electromagnetic, STP9CF59H waxay ku adag tahay dhammaan noocyada kala duwan ee deegaanka codsiga.
Heerkulka Heerkulka Jidhka ee aan Xidhiidhka Lahayn Dareemka Heerarka Infrared STP9CF59L0
Dareemaha heerkulbeegga infrared ee STP9CF59L0 ee cabbiraadda heerkulka aan xidhiidhka ahayn waa dareeme kuleyl leh koronto soosaareed si toos ah u dhiganta shilka infrared (IR) awoodda shucaaca.Thanks to naqshadeynta faragelinta ka-hortagga korantada, STP9CF59L0 waxay u adkeyd dhammaan noocyada kala duwan ee jawiga codsiga.
STP9CF59L0 oo ka kooban nooc cusub oo CMOS ah oo ku habboon dareemaha dareemaha kuleylku wuxuu leeyahay dareen wanaagsan, heerkulka yar ee dareenka iyo sidoo kale soo saarista sare iyo isku halaynta.Chip tixraaca kuleyliyaha saxda ah ee saxda ah ayaa sidoo kale lagu dhex daray magdhowga heerkulka jawiga.
Cabbiraadda Heerkulka Jirka Dijitaalka ah ee Dareemaha Heer-kulka Infrared ee aan Xidhiidhka ahayn STP10DF55
Dareemaha heerkulbeegga infrared ee STP10DF55 ee cabbiraadda heerkulka aan xidhiidhka ahayn waa dareeme kuleyl leh koronto soosaareed si toos ah u dhiganta shilka tamarta shucaaca infrared (IR).Thanks to naqshadeynta faragelinta ka-hortagga korantada, STP10DF55 waxay u adkeyd dhammaan noocyada jawiga codsiga.
STP10DF55 oo ka kooban nooc cusub oo CMOS ah oo ku habboon dareemaha dareemaha heerkulbeegga ayaa leh dareen wanaagsan, isku xidhka heerkulka yar ee dareenka iyo sidoo kale soo saarista sare iyo isku halaynta.Chip tixraaca kuleyliyaha saxda ah ee saxda ah ayaa sidoo kale lagu dhex daray magdhowga heerkulka jawiga.
Heerkulbeegga Infrared ee Dareemaha Heerkulka ee aan Xidhiidhka lahayn
Dareemaha heerkulbeegga infrared ee STP10DF55C ee cabbiraadda heerkulka aan la xidhiidhin waa dareeme kuleyl leh koronto soosaareed si toos ah u dhiganta shilka infrared (IR) awoodda shucaaca.Thanks to naqshadeynta faragelinta-ka-hortagga-electromagnetic, STP10DF55C waxay ku adag tahay dhammaan noocyada kala duwan ee jawiga codsiga.
STP10DF55C oo ka kooban nooc cusub oo CMOS ah oo ku habboon dareemaha dareemaha heerkulbeegga ayaa leh dareen wanaagsan, isku xidhka heerkulka yar ee dareenka iyo sidoo kale soo saarista sare iyo isku halaynta.Chip tixraaca kuleyliyaha saxda ah ee saxda ah ayaa sidoo kale lagu dhex daray magdhowga heerkulka jawiga.
Dusha sare ee Dareemka IR ee loogu talagalay Ogaanshaha Heerkulka Jirka ee aan Xidhiidhka lahayn STP10DF55C-AD
STP10DF55C-AD oo ka kooban nooc cusub oo CMOS ah oo ku habboon dareemaha dareemaha kuleylku wuxuu leeyahay dareen wanaagsan, heerkulka yar ee dareenka iyo sidoo kale soo saarista sare iyo isku halaynta.Xirmada buurta dusha sare ee TO-Can waxaa loo qaatay STP10DF55C-AD, taasoo ka dhigaysa shidma la jaanqaadi kara tignoolajiyada korka sare.Waxaa intaa dheer, sumadda ku taal xagga hoose ee STP10DF55C-AD waxay hubisaa saxnaanta isu-ururinta dareenka IR.Naqshadan gaarka ah waxay wanaajisaa ku celcelinta jidka indhaha ee IR.Sidaa darteed, saxnaanta heerkulka aan la xiriirin ee wanaagsan waxaa dammaanad qaaday STP10DF55C-AD.
Heerkulka Dareemaha Heer-kulka ee IR Baadhista Aan La Xidhiidhin ee La Socodka Jirka Aadanaha STP11DF55
Dareemaha heerkulbeegga infrared ee STP11DF55 ee cabbiraadda heerkulka aan xidhiidhka ahayn waa dareeme kuleyl leh koronto soosaareed si toos ah u dhigma awoodda shucaaca infrared (IR).Thanks to naqshadda faragelinta ka-hortagga-electromagnetic, STP11DF55 waxay ku adag tahay dhammaan noocyada kala duwan ee jawiga codsiga.
STP11DF55 oo ka kooban nooc cusub oo CMOS ah oo ku habboon dareemaha dareemaha kuleylku wuxuu leeyahay dareen wanaagsan, heerkulka yar ee dareenka iyo sidoo kale soo saarista sare iyo isku halaynta.Chip tixraaca kuleyliyaha saxda ah ee saxda ah ayaa sidoo kale lagu dhex daray magdhowga heerkulka jawiga.
Ogaanshaha Heerkulka Bini'aadamka Infrared ee Aan La Xiriirin Cabbirka Heerkulbeegga IR Sensor STP11DF55C
Dareemaha heerkulbeegga infrared ee STP11DF55C ee cabbiraadda heerkulka aan xidhiidhka ahayn waa dareeme kuleyl leh koronto wax soo saar si toos ah u dhigma dhacdada shucaaca infrared (IR).Thanks to naqshadda faragelinta ka-hortagga-electromagnetic, STP11DF55C waxay u adag tahay dhammaan noocyada kala duwan ee deegaanka codsiga.
STP11DF55C oo ka kooban nooc cusub oo CMOS ah oo ku habboon dareemaha dareemaha heerkulbeegga ayaa leh dareen wanaagsan, isku xidhka heerkulka yar ee dareenka iyo sidoo kale soo saarista sare iyo isku halaynta.Chip tixraaca kuleyliyaha saxda ah ee saxda ah ayaa sidoo kale lagu dhex daray magdhowga heerkulka jawiga.